Kutheni ndithiyile iiAkhawunti eziQinisekisiweyo | Martech Zone
NgoMvulo, Juni 3, 2013 NgoMvulo, Juni 3, 2013 Douglas Karr
Umhlobo olungile, Jason Falls, Ube nohlaziyo olumnandi kuFacebook ekuboniseni nayiphi na imidiya yoluntu esayine kuFacebook I-akhawunti eqinisekisiweyo. Uhlaziyo lwakhe alukhuselekanga emsebenzini, kodwa lwadala isoyikiso ngamagunya eendaba ezentlalo. Ixesha lakhe kubantu abasayinileyo baqala ngo "d" kwaye baphela "ngebhegi", hehe.
A I-akhawunti eqinisekisiweyo ichazwe ngophawu lokujonga oluhlaza oluhlaza okwesibhakabhaka okanye oluhlaza okwesibhakabhaka kwiprofayili yomntu kwi-Twitter okanye ku-Facebook. Ukuqinisekiswa kuthetha nje ukuba i-Twitter okanye i-Facebook ithathe ixesha lokuqinisekisa ukuba umntu osemva kweakhawunti ngulo mntu ucinga ukuba unguye. Kwinqanaba lomphezulu, kuvakala ingumbono olungileyo… asifuni ukuba abantu bakhohliswe.
NDIYONYANYA akhawunti eqinisekisiwe ngezizathu ezimbalwa:
Asinguye wonke umntu onokufaka isicelo - njengoko UScott Monty Yibeke, i-1% inokufikelela kwiakhawunti eqinisekisiweyo. Kutheni ingenguye wonke umntu? Xa ndiqinisekisa ishishini lam kuGoogle +, ndakwazi ukuyenza ngokukhawuleza kwaye ndingenangxaki. Kwakunjalo kwaye kuvuleleke kuwo wonke umntu.
Kuthetha okungakumbi - yonke into iyabonakala kwiwebhu. Nokuba ibha eluhlaza kwindawo ekhuselekileyo yewebhusayithi, a fan ephezulu okanye ukubala komlandeli, iphepha le-wikipedia, okanye ibheji evela kwiwebhusayithi ye-premium, zonke izalathisi zempembelelo kunye nokuthembela kwiwebhu imiba kunye nefuthe lokuziphatha kwabantu kwi-intanethi.
Kuba zikhona kwaye azinazo akhawunti eqinisekisiweIdemokhrasi ithatha isihlalo esingasemva. Ngoku abanye abantu baya kukhawulezisa ukukhula kwabo-hayi ngenxa yexabiso abalibonelela ngenethiwekhi yabo-kodwa ngenxa yokuba banophawu lokujonga oluhlaza okanye oluhlaza okwesibhakabhaka. Olu phawu lokutshekisha luchaza "Ndibaluleke ngaphezu kwabo bonke abanye" kwaye, ngenxa yoko, luya kukhawulezisa abalandeli kwaye balandele.
Ukuba awundikholelwa, awuyiqondi i-egos kweli shishini. Abantu bayangxama ukufumana ezi akhawunti ziqinisekisiweyo… nokuba akukho nto ibonisa ukuba umntu usebenzisa isazisi sakhe ngendlela engafanelekanga. Bayazibhokoxa ukuze bazifumane kuba bayazi ukuba uphawu lokujonga oluhlaza oluncinci okanye oluhlaza okwesibhakabhaka ligolide. Iya kukhokelela ekulandeleni okukhulu, kumathuba amaninzi okuthetha nokubhala, kwaye-ekugqibeleni-ishishini elininzi. Hayi ngenxa yokufaneleka komntu, kodwa ngenxa yokhangelo olubonakalayo.
Vula inkqubo yokuqinisekisa kuye nabani na oyifunayo. Njengokuba sifaka isicelo sezatifikethi se-SSL okanye ishishini kuGoogle +, beka indlela apho wonke umntu enethuba lokuqinisekisa isazisi sakhe. Yenzele wonke umntu, okanye ungayenzi kwaphela.
Juni 3, 2013 ngo-10: 42 AM
Enkosi ngokuthetha into ebesiyicinga sonke ixesha elide ngoku!
Juni 4, 2013 ngo-11: 48 AM
iiakhawunti ezikhoyo ziya kubangela ukhuseleko olungakhuselekanga. Ndiyakucaphukela